HomeWararka MaantaDortmund Oo Daboolka Ka Qaaday Inay Soo Xero Gallisay Bedelka Lewandowski
Kooxda Germalka ah ee Borussia Dortmund ayaa xaqiijisay inay qalinka ku duugtay heshiis aan qiimihiisa la sheegin oo uu ay xagaagan kula soo wareegi doonto weeraryahan Adrian Ramos oo kooxda u buuxin doonaa kaalintii uu ku baneeyey xidiga ay kala wareegtay Bayern Munich ee Robert Lewandowski.
Dortmund oo habeenkii Arbacadu soo gallaysay ka hadhay horyaalka Champions League kadib markii ay Real Madrid kaga guulaysatay celcelis 3-2 ah, ayaa si ay u ilowdo dhaawaca ka soo gaadhay Horyaalka Yurub bedelkiisa si rasmi ah u xaqiijisay inay heshiis la gashay weeraryahankii inta badan lagu xidhiidhinayay ee Ramos.
Agaasimaha ciyaaraha Borussia Dortmun, Mr Michael Zorc oo todobaadkan bilowgiisii daboolka ka qaaday in naadigu laba ciyaaryahan heshiis la saxeexan doono xagaagan, ayaa soo saaray warka laacibkan reer Colombia, kaas oo uu rumaysan yahay inuu ku haboon yahay qaab ciyaareedka uu doonayo tababare Jurgen Klop.
“Adrian Ramos waa ciyaaryahan qiimo leh waana mid kamid ah weeraryahanada ugu goolasha badan horyaalka Germany,” ayuu ku yidhi shabakada rasmiga ah ee kooxda. “Wuxuu si qurux badan u buuxiyey shuruudahii ay u baahnayd Borussia Dortmund.”
Ramos ayaa xili ciyaareedkan soo bandhigay qaab ciyaareed fiican, waxaanu u dhaliyey naadigiisa Hertha Berlin 16 gool , 19 ciyaarood oo uu u saftay.
Borussia Dortmund Oo Dhulka La Dhacday Bayern Munich Kuna Guulaysatay German Super Cup: Sawiradii Ciyaarta
Tababare Jose Mourinho Oo Iftiimiyey qofkii ka hor jeegsaday inuu layliyo Xulka England